दलित सौन्दर्य–बोध « Loktantrapost
१७ असार २०७३, शुक्रबार १२:४०
एउटा कार्यव्रmममा एक सुन्दर युवतीप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण भयो । उनी को हुन् ? के थरी हुन् ? जस्ता जिज्ञासा धेरैमा थिए । तर, केही समयमै युवाहरुमा युवतीप्रतिको उत्सुकता निराशामा बदलियो । युवती दलित समुदायकी रहिछन् । युवाहरुमाझ खासखुस कुरा हुन थाल्यो । केटी त बाहुन, क्षेत्री जस्तै राम्री रै’छ । दलित जस्ती त कुनै कुनाबाट पनि छैन । यी संवादको प्रत्क्षय स्रोता म थिए । यी र यस्तै खाले संवाद सुन्न अभ्यस्त म मात्र होइन, करिब–करिब हामी सबै भुक्त भोगी छौँ ।
नेपाली समाजमा सुन्दर–असुन्दर, असल–खराब, शिक्षित–अशिक्षित, सफा–फोहारी छुट्याउनु पर्यो भने जातलाई मानक बनाउने गरिन्छ । सुन्दर युवती बाहुनी जस्ती, कुरुप बाहुन दमाई–कामी जस्तो, बाहुन पनि गरीब भए दलित जस्तो, शिक्षित बाठो दलित भए बाहुन क्षेत्री जस्तै, बाहुन, क्षेत्रीको बानी व्योहोरा खराब भए कामी–दमाई जस्तै भनी तुलना गरेको हामी प्रसस्तै पाउँछौँ । समाजमा तुलना गर्ने मानक यसरी जातका आधारमा बनेको छ ।
नेपाल समाजमा जात व्यवस्थाका आधारमा निमार्ण भएको सौन्दर्य बोधका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक भएको छ । दलित, सौन्दर्य र बोध यी तीन शब्दको संयोजनबाट बनेको वाक्य दलित सौन्दर्य बोधको हो ।
दलित शब्द अर्थ के हो ?
दलित शब्दको बारेमा लामो बहस र छलफल भएको छ । यो विवादित र चर्चित शब्द हो । यो शब्दको पक्ष विपक्षमा विद्वानहरुले बेला–बेलामा आ–आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । ‘दलित’ शब्दले हिन्दु समाजमा वर्णव्यवस्था अनुसार ‘अछूत’ बनाइएको, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्रमध्ये ‘तल्लो’ जातमा पर्ने र सामाजिक–सांस्कृतिक तथा आर्थिकरुपमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायलाई बुझाउँछ । शब्दकोषीय अर्थमा हेपिएको, दलिएको, पिसिएको, नेपाली समाजमा विस १९१० को मुलुकी ऐन अनुसार ‘अछूत’ वा ‘पानी अचल’ बनाइएको जातीय समुदाय बुझाउँछ ।
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली शब्दकोषको परिभाषा अनुसार, सुन्दरको अर्थ मनलाई हर्ने, राम्रो, मनोहर, आकर्षक, असल, जाति, बेस उल्लेख गरिएको छ । ईन्द्रीयहरुको माध्यमबाट कुनै पनि वस्तु वा विचारलाई राम्रो–नराम्रो, मीठो–नमीठो, प्रिय–अप्रिय, सुन्दर–कुरुप, रुचिकर–अरुचिकर, अनुभूत गर्ने गुण नै सौन्दर्य–दृष्टि वा सौन्दर्य चेतना हो (सङ्गीत स्रोता) । विश्वमा सौन्दर्यप्रतिको बोध फरक–फरक हुने गरेको छ । चीनमा एकताका स्त्रीहरुको खुट्टा सानो हुनु कुलिन घरनाकी तथा सुन्दरी भएको मानिन्थ्यो । सुन्दर हुने नाममा फलामको जुत्ता लगाएर खुट्टा सानो बनाउँन युवती जस्तोसुकै कष्ट सहन्थ्ये । माक्र्सवादीहरुले सौन्दर्य–दृष्टिको निमार्ण वर्गीय हुने गरेको बताएका छन् ।
सामान्यतय बोध भन्नाले बुझाईसँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि विषय वस्तुका बारेमा सुनेर पढेर बुभ्mने क्षमता बोध हो । शब्दकोषले बोध भन्नाले, सुनेर, पढेर बुभ्mने क्षमता वा सीप, जान्ने वा बुभ्mने, काम, समझ, ज्ञान, जानकारी हो भनी परिभाषित गरेको छ । बोध मानिस स्वयम्ले स्वतन्त्र रुपमा निर्धारण गर्नुे कुरा नभएर राज्यशक्ति र सामाजिक संरचना अनुसार निर्धारण हुने कुरा हो । राज्यले बल प्रयोग गरेर व्यक्ति र समाजलाई कुनै पनि विषयमा उसको अनुकूल बुझ्न बाध्य बनाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा सौन्दर्य चेत फरक छ । नेपाली समाजको विभाजन जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक तथा भाषिक–सांस्कृतिक विभेदसँग घुलमिल भएको छ । हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले मानिसलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी चार वर्णमा विभाजन गरेको छ । सबैभन्दा माथि ब्रामहण र सबैभन्दा तल शुद्रलाई राखेको छ । हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा श्रमको विभाजन गरिएको छ । श्रम जातको आर्थात् वर्णका आधारमा निर्धारण गरियो र मानिसको जुन जातमा जन्म हुन्छ, उसलाई त्यसै जातलाई निर्धारण गरिएको श्रम गर्न बाध्य बनाइयो ।
हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राह्मणलाई पढ्ने पढाउने, क्षेत्रीलाई शासन गर्ने, वैश्यलाई व्यापार–व्यवसाय गर्ने र शुद्रलाई कडा परिश्रम गरेर राजा र तीन वर्णको सेवा गर्ने जिम्मा दिएको थियो । कुनै पनि समाजको राज्य व्यवस्था र आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनाका आधारमा सौन्दर्य–दृष्टि निमार्ण हुने कुरा वस्तुगत यथार्थ हो भनि सौन्दर्यविद्हरु दाबी गर्छन् । राज्यसत्तामा लामो समयदेखि हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले उच्च मानेका जातीहरुको हालीमुहाली रहँदै आएको कुरा यथार्थ हामी सामु छर्लङ्ग छ । मुलुक धर्म निरपेक्ष र गणतान्त्रिक भए पनि नेपाली समाजको संस्कार, संस्कृति वर्ण व्यवस्थाकै मूल्य–मान्यताबाट निर्देशित छ । नेपाली समाजको ठुलो हिस्सा वर्ण व्यवस्थाको जगमा आधारित छ ।
वर्ण व्यवस्थाद्वारा सञ्चालित राज्यसत्ताले कथित उच्च जातलाई बौद्धिक र पराव्रmमी कामको जिम्मा दियो र कथित तल्ला जातकालाई कठोर र सधैँ फोहोरसँग सम्बन्धित कामको जिम्मा दियो । फलत उच्च भनिएकाहरुले सधैँ सफा सुघर भएर शिक्षित र दिक्षित हुने अवसर पाए । तल्ला भनिएका जातकाहरुले फलामको काम, सफाईको काम गरेर फोहोर लुगा फाटा लगाउनु पर्ने अवस्था भयो । शासन सत्तामा भएकाहरुले आफूलाई स्वघोषणाद्वारा राम्रो र सत्ताधारीहरु जस्तै हुनु राम्रो हुनु हो भनि सुन्दरताको मानक निमार्ण गरे । नेपालको राज्यसत्तामा लामो समयदेखि बाहुन क्षेत्रीहरु नै शासक भएकाले सौन्दर्यको निमार्ण पनि बाहुन क्षेत्रीको जस्तै शारीरिक संरचना भएको, उनीहरु जस्तै जुक्ति बुद्धि भएको अर्थात् उनीहरुमा भएका चरित्रहरु नै सौन्दर्यका मानक बनाइयो ।
उच्च जात भनिएकाहरु आर्थिक सामाजिक रुपमा सम्मानित हँुदै गए र दलितहरु अपमानित र विपन्न हँुदै आत्मसम्मान गुमाउँदै जीवनयापन गर्न बाध्य भए । वर्ण व्यवस्थाले अछूत, शुद्र र चण्डाल जस्ता शब्दलाई दलित समुदायलाई हेप्ने शब्दका रुपमा परिभाषित गरिदियो र ब्रामहणलाई सम्मानित समुदायका रुपमा स्थापित गर्यो ।
सौन्दर्य–बोध खाद्यन्नसँग पनि जाडियो । सुगुर र राँगा खाने कमसल, खसी खाने अब्बल, गाली गलौजमा प्रयोग हुने शब्द ‘काले कामी र कामी काले उस्तै–उस्तै हुन्’, ज्यालामा नमिलेका दमाई जस्तो, कामी दमाईको जस्तो बुद्धि भएको, गोरो, नाक लामो चुच्चो नाक, बदामी आँखा राम्रो । पुरुषले दौरा–सुरुवाल, ढाका, टोपी लगाए राम्रो र महिलाले गुन्युचोली, पटुकी लगाउँदा राम्री हुने कुरा राज्यद्वारा प्रसार गरी मान्य बाध्य बनायो ।
पढे, लेखेको शिक्षित, चलाख शासक, मालिक, सफा, धनी, समाजमा सम्मानित, गोरो, असल नेता लगायतको गुण भएको नमुना मानव ब्राहमण बनाइयो । खराब, जडियाँ, अनपढ, गरीब, फोहोरी, कामदार, सेवक, समाजमा अपमानित हुनुपर्ने, सर्वसाधरणलाई दलित नमुना बनाइयो । यही मानकका आधारमा आजभोलि सौन्दर्यको मापन गरिनु भनेको ‘आँखा बन्द गरेर हात्ती छामेर, हात्ती त नाग्लो जस्तो हुँदारहेछ’ भने जस्तो मात्र हो । चेतनशील मानवले जातीय सौन्दर्य–बोध अब डिलिट गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।